कर्नाटकमा भाजपालाई सरकार बनाउन बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दियो अनुमति
२०७५ जेठ ३ बिहिबार, नयाँ दिल्ली ।भारतको कर्नाटक राज्यमा सरकार निर्माणका लागि भारतको सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएपछि भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा यहाँ सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । आफूसँग बहमत रहेकोले सरकार बनाउन पाउनुपर्ने भन्दै भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले आफ्नो पक्षमा सरकार निर्माण गर्न दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । ... बाँकी अंश»
ट्रम्पजस्तो साथी भएपछि दुस्मनको के आवश्यकता ?
२०७५ जेठ ३ बिहिबार, काठमाडौं । युरोपियन युनियन ईयूका प्रमुख डोनाल्ड टस्कले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्तो साथी भएपछि कुनै पनि दुस्मनको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । बुधबार बल्गेरियाको राजधानीमा आयोजना गरिएको रात्रिभोजमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ २ बुधबार, नयाँदिल्ली । भारत सरकारले विवादास्पद भूमि काश्मिरमा बुधबार एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरेको छ । मुश्लिम समुदायको एकमहिने पर्व रमजानको अवधिभर काश्मिरमा लडाकूहरूविरुद्ध कुनै सैन्य कारबाही नगर्ने भारतीय पक्षको घोषणा छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ २ बुधबार, सोल । उत्तर र दक्षिण कोरियाका उच्चस्तरीय अधिकारीहरुको बुधबार बस्ने भनिएको बैठक उत्तर कोरियाले एकतर्फी रुपमा स्थगित गरेको जनाएको छ । बुधबार दक्षिण कोरियामा पर्ने एक सीमाक्षेत्रीय गाउँ पानुमजोममा बस्ने भनिएको उत्तर कोरियाली उच्चस्तरीय अधिकारी सम्मिलित एक बैठक अकस्मात स्थगित भएको जानकारी उत्तर कोरियाले दिएको छ । ... बाँकी अंश»
सफाइ पाएसँगै सिद्दूले गान्धीलाई भने, “मेरो बाँकी जीवन काँग्रेस आईलाई”
२०७५ जेठ २ बुधबार, काठमाडौं । सन् १९८८ को सडक दुर्घटनाको विषयमा जारी रहेको मुद्दाबाट छुट्कारा पाएसँगै भारतको पञ्जाव राज्यका मन्त्री नभजित सिद्दूले आफ्नो जीवन काँग्रेस आईका लागि समर्पण गर्ने बताएका छन् । मंगलबार अदालतले उक्त घटना हतया नभई दुर्घटना रहेको फैसला सुनाएको हो । ... बाँकी अंश»
उत्तर कोरियाको कडा चेतावनी– ‘परमाणु हतियार त्याग्ने जिद्दी गरे किम–ट्रम्प वार्ता हुन सक्दैन’
२०७५ जेठ २ बुधबार, काठमाडौं । उत्तर कोरियाले न्युक्लियर हतियार त्याग्नका लागि लगातार दबाब दिने कामलाई जारी राखेको खण्डमा डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोन उनको बीचमा हुन गइरहेको वार्ता रद्द हुने चेतावनी दिएको छ । ... बाँकी अंश»
कर्नाटक चलखेलः बीजेपी काँग्रेस र जेडीएसका सांसद किन्दै
२०७५ जेठ २ बुधबार, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कर्नाटकबाट काँग्रेस आई र जेडीएसका सांसद किनेरै भए पनि भारतीय जनता पार्टी बिजेपीले राज्य सरकार बनाउने प्रयास थालेको आरोप लागेको छ । ... बाँकी अंश»
रद्द भयो उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको वार्ता
२०७५ जेठ २ बुधबार, काठमाडौं । उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको वार्ता रद्द भएको छ । उत्तर कोरियाले चरम असन्तुष्टि जनाउँदै उच्चस्तरीय वार्ता रद्द गरेको हो । ... बाँकी अंश»
निर्माणाधीन आकासे पुल भत्किँदा १६ जनाको मृत्यु
२०७५ जेठ १ मंगलबार, काठमाडौं । उत्तर भारतको वाराणसीमा निमार्णाधीन आकासे पुल भत्किँदा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । वाराणसी जिल्लाको सेनाको अस्थायी शिविर रहेको क्षेत्रमा भएको उक्त दुर्घटनामा केहीको अवस्था गम्भीर छ । ... बाँकी अंश»
चीनका वृद्धवृद्धा बुढ्यौलीमा पनि खुशी : सर्वेक्षण
२०७५ जेठ १ मंगलबार, बेइजिङ, चीन । चीनको ग्रामिण तथा शहरी दुवै क्षेत्रका अधिकांश वृद्धवृद्धाहरू बुढ्यौलीका बाबजुद पनि खुशीसाथ जीवनयापन गरेको बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा बताइएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ जेठ १ मंगलबार, सोल ।उत्तर र दक्षिण कोरियाका उच्चस्तरीय अधिकारीहरुको बैठक बुधबार दक्षिण कोरियातर्फ पर्ने एक सीमाक्षेत्रीय गाउँ पानुमजोममा बस्ने भएको छ । उत्तर कोरियाली उच्चस्तरीय अधिकारी सम्मिलित एक प्रतिनिधिमण्डल सोमबारमात्र चीन पुगेको समाचारमा जनाइएको थियो । ... बाँकी अंश»
मोदीले दिएको चेतावनी बारे मनमोहन सिंहले लेखे राष्ट्रपतिलाई पत्र
२०७५ जेठ १ मंगलबार, नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसलाई दिएको चेतावनीका बारेमा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्र लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले कर्नाटकको हुब्लीमा दिएको भाषणका क्रममा बोलेको विषयलाई पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहले खण्डन गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
मोदीको नेपाल भ्रमण बीजेपीलाई फाप्यो, कर्नाटकमा 'बहुमत'
२०७५ जेठ १ मंगलबार, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण फापेको छ । मोदीको पार्टी बीजेपीले कर्नाटक राज्यमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने पक्का जस्तै देखिएको छ । ... बाँकी अंश»
इजरायली सेना र प्यालेष्टाइनीबीच झडप, ५५ को मृत्यु, २००० भन्दा बढी घाईते
२०७५ जेठ १ मंगलबार, काठमाडौं। अमेरिकाले इजरायलको तेल अभिभबाट आफ्नो दूतावास जेरुसलम सार्नु केही घण्टाअघि इजरायली सेना र प्यालेष्टानीबीच भएको झडपमा कम्तिमा ५५ जना मारिएका छन्। गाजामा १२ वर्षीय बालकसहित प्रदर्शनकारीलाई इजरायली सेनाले गोली हानेर मारेको प्यालेष्टाइनले जनाएको छ। ... बाँकी अंश»
२०७५ बैशाख ३१ सोमबार, बेइजिङ। उत्तर कोरियाका उच्चस्तरीय अधिकारीहरु सम्मिलित एक प्रतिनिधिमण्डल सोमबार चीन पुगेको समाचार छ। उत्तर कोरियाली उच्चस्तरीय अधिकारी सो प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी भएको समाचार जापानको सरकारी प्रशारण संस्था एनएचके टेलिभिजनले दिएको छ। ... बाँकी अंश»
२०७५ बैशाख ३१ सोमबार, नयाँदिल्ली। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आध्र प्रदेश र राष्ट्रिय राजधानी नयाँ दिल्लीसमेतमा गएरातिदेखि धुलोका कणसहितको आँधी बेहरी र वर्षा शुरु भएको छ। यस आँधीका कारण सोमबार बिहानसम्ममा कम्तीमा पनि ४१ जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ। ... बाँकी अंश»
इन्डोनेसियाको आक्रमणको राष्ट्रसंघद्वारा भत्र्सना
२०७५ बैशाख ३१ सोमबार, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो ग्युटेर्सले इन्डोनेसियामा आइतबार भएको आक्रमणको भत्र्सना गरेका छन् । आइतबार इन्डोनेसियाको सुराबायाका तीन स्थानमा भएको आक्रमणको उनले भत्र्सना गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
चिनियाँ कम्पनी बचाउने कसरी पलायो ट्रम्पको मन ?
२०७५ बैशाख ३१ सोमबार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी जेटीई बचाउने आफ्नो चाहना रहेको बताएका छन् । अमेरिका र चीनको बीचमा दोस्रो चरणको वार्ता हुनुअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिको तर्फबाट यस किसिमको भनाइ आएको हो । ... बाँकी अंश»
विवादबीच जेरुसलेममा आफ्नो राजदूतावासको सुरुवात गर्दै अमेरिका
२०७५ बैशाख ३१ सोमबार, काठमाडौं । अमेरिकाले इजरायलमा आफ्नो राजदूतावासको सुरुवात गर्ने भएको छ । सोमबार उसले तामझामका साथ नयाँ दूतावासको सुरुवात गर्ने भएको हो । यो निर्णयले इजरायलले प्रशंसा गरेको छ भने प्यालेस्टाइनले यसको विरोध गरेको छ । ... बाँकी अंश»
भारी वर्षा र आँधीले भारत चौपट्, कम्तिमा ४८ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी घाइते
२०७५ बैशाख ३१ सोमबार, काठमाडौं । भारी वर्षा र ठुलो आँधीको कारण भारतका विभिन्न राज्यमा गरी अहिलेसम्म कम्तिमा ४८ जना मानिसहरुको ज्यान गएको छ । भारतको उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आध्र प्रदेश, तेलंगना र गुजरातमा गरी पछिल्लो २४ घण्टामा ४८ जनाको ज्यान गएको हो । त्यसका साथै ५० जना भन्दा बढी मानिसहरु घाइते भएका छन् । ... बाँकी अंश»